I-Semalt: Iyini Ithuluzi le-Page Links Scraping. Izici Ezihlukile Zalezi Ezingxenyeni Ze-Inthanethi
Ikhasi Lokuxhumanisa Ithuluzi Lokudweba kuphazamisa amakhodi e-site wesayithi nokukhipha izixhumanisi kusuka kumakhasi ahlukene ewebhu. Uma idatha idliwe ngokugcwele, ibonisa izixhumanisi ngendlela yombhalo futhi yenza umsebenzi wethu ube lula. Lesi sici se-intanethi asikona kuphela izixhumanisi zangaphakathi kodwa futhi sibonisa izixhumanisi zangaphandle futhi iguqula idatha ibe ifomu elifundekayo. Ukulahla izixhumanisi kuyindlela elula yokuthola izicelo ezahlukene, amawebusayithi, kanye nobuchwepheshe obusekelwe kuwebhu. Inhloso Yekhasi Lokuxhunyaniswa KwamaThuluzi ukukhipha ulwazi kusuka kumasayithi ahlukene - unmetered server. Yakhiwe ngethuluzi eliphelele eliqondayo futhi eliqondakalayo lomzila okuthiwa i-Lynx futhi lihambisana nazo zonke izinhlelo zokusebenza. I-Lynx isetshenziselwa ukuhlola nokuxazulula amakhasi wewebhu kusuka kumlayini womyalo. Izixhumanisi zekhasi i-scraper iyithuluzi elihle elaqala ukuqala ngo-1992. Isebenzisa izivumelwano ze-inthanethi kuhlanganise WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, ne-HTTPS ukuze wenze umsebenzi wakho ufezeke.
Izici ezintathu eziyinhloko zethuluzi:
1. Idatha ye-Scrape ku-Multiple Threads:
Ukusebenzisa ithuluzi lekhasi lokusika , ungakwazi ukukhipha noma ukukhipha idatha kumathebhu amaningi. Abaqashi be-Ordinary bathatha amahora ukuze benze imisebenzi yabo, kodwa leli thuluzi liqhuba izintambo eziningi ukuze zihlole amakhasi angama-30 ngesikhathi esisodwa futhi azichithe isikhathi sakho namandla.
2. Ukukhipha Idatha kusuka kumawebhusayithi eDynamic:
Amanye amasayithi ashukumisayo asebenzisa amasu okulayisha idatha ukudala izicelo ezingafani njenge-AJAX. Ngakho-ke, kunzima kumuntu ojwayelekile web scraper ukukhipha idatha kusuka kulawo masayithi. Izixhumanisi zekhasi le-Scraping Tool, noma kunjalo, inezici ezinamandla futhi yenza abasebenzisi bavune idatha kusuka kumasayithi amabili ayisisekelo kanye ashukumisayo kalula. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lingakhipha ulwazi kumasayithi omphakathi wezenhlalo futhi linemisebenzi ehlakaniphile yokugwema iphutha le-303.
3. Ukuthumela Ulwazi Kuzo Zonke Ifomethi:
Ikhasi Lokuxhuma Ithuluzi Lokuxhunywa lisekela amafomethi ahlukene kanye nedatha yokuthumela ngaphandle nge-MySQL, i-HTML, i-XML, i-Access, i-CSV, ne-JSON. Ungaphinda ukopishe futhi unamathisele imiphumela kwiDokhumenti yeZwi noma ulandele ngokuqondile amafayela asusiwe ku-hard drive yakho. Uma ulungisa izilungiselelo zalo, ithuluzi lokuxhumanisa ikhasi lizokulanda idatha yakho ku-hard disk yakho ngokuzenzakalelayo kufomethi echazwe ngaphambilini. Ungasebenzisa le datha ungaxhunyiwe ku-intanethi futhi ungathuthukisa ukusebenza kwesayithi lakho ngezinga elithile.
Indlela yokusebenzisa le thuluzi?
Kumelwe ufake i-URL futhi uvumele leli thuluzi ukwenza umsebenzi walo. Izoqala ukuhlaziya i-HTML futhi izokhipha idatha kuwe ngokusekelwe emiyalweni yakho kanye nezidingo zakho. Imiphumela ngokuvamile iboniswa ngendlela yezinhlu. Uma izixhumanisi zifakwe ngokugcwele, isithonjana sizoboniswa ngakwesokunxele. Uma uthola umlayezo "Azikho izixhumanisi ezitholiwe" kungenzeka ukuthi ngoba i-URL oyifakile yayingavumelekile. Qiniseka ukuthi ufake i-URL yangempela ukuze ususe izixhumanisi kusuka. Uma ungakwazi ukukhipha izixhumanisi ngesandla, enye inketho ukusebenzisa ama-API. I-API isetshenziswe ngendlela ekhangayo futhi isekela amakhulu emibuto ngehora kubasebenzisi.